JINGHPAW KASA: မိုးလင်းတာနဲ့ လက်နက်ကြီး စပစ်
နေထွက်လာတာနဲ့ လက်ကမြင်းပြီး တဒိန်းဒိန်းနဲ့ လှမ်းပစ်နေကြပြန်ပြီ။ ထိချင်ရာထိ သူတို့ မမှု။ လက်ထဲရှိတာ ပစ်ရဖို့ အဓိက ဖြစ်နေတဲ့ အမိအဖ တပ်မတော်။
ဒီအမြောက်ဆံ တခုဟာ သိန်း၄၀ ကျော်တန်ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်တုန်းက နိုင်ငံတော်က ချမှတ်တဲ့ မူလတန်းကျောင်း တဆောင်နဲ့ တန်ဖိုးတူတယ်... လို့ ပြောကြတယ်။ အခု ဘတ်ဂျက်မသိလို့ ယခင် ဘတ်ဂျက်နဲ့ ရိုးသားစွား နှိုင်းယှဉ်ပြတာပါ။ ပညာရေးဟာ အရေးကြီးပါတယ်လို့ တဖွဖွပြောနေတဲ့သူတွေ.. ခရိုနီတွေဆီက ယူမဲ့အစား စစ်တပ်ဘတ်ဂျက်ထဲက ယူနိုင်ရင်တော့ မိုက်မှာဘဲ..
As soon as the dawn comes, Govt army has started firing of motors. The target doesn't matter... seems they just fire for their own satisfaction..
The cost ofamotor shield is equivalent to the State budget for building ofaprimary school in 2010 (I don't know the budget now). Should the people who says education is important should bargain from the budget of the country, or promote cronies with education fund?
chin leo said...
ခရိုနီတွေနှင့်စစ်တပ်ဘတ်ဂျက်တွေက နေရမဲ့ငွေကြေးတွေကိုပညာရေးကိစ္စမှာသုံးရင် အ ကောင်းဆုံးပေါ့။အင်္ဂလိပ်စာဖြစ်ဖြစ် မြန်မာစာဖြစ်ဖြစ်မှန်အောင်ရေးနိုင် တာပေါ့။စာလုံးပေါင်းမှန်အောင်ရေးမှအဓိပ္ပာယ် nga မှာပေါ့။